Otu esi etinye ImageMagick na Debian 11 - LinuxCapable
Otu esi etinye ImageMagick na Debian 11
October 30, 2021 September 2, 2021 by Jọshụa James
Nhọrọ 1 - Wụnye ImageMagick site na APT
Nhọrọ 2 - Wụnye ImageMagick site na Isi Iyi
Na-emelite ImageMagick site na Isi Iyi
Nnwale & nyochaa ImageMagick
Iwu njedebe Ọmụmaatụ:
Iwu na mmechi
ImageMagick bụ ngwa mepere emepe arụnyere dị ka nkesa ọnụọgụ abụọ ma ọ bụ dị ka koodu isi mmalite. ImageMagick nwere ike ịtụgharị, gụọ, dee na hazie onyonyo raster. ImageMagick dịkwa n'ofe nyiwe isi niile, gụnyere Android, BSD, Linux, Windows, Mac OSX, iOS, na ọtụtụ ndị ọzọ.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta otu esi etinye ImageMagick na Debian 11 Bullseye iji usoro ntinye APT ma ọ bụ isi iyi.
Ụzọ kachasị mfe na nke akwadoro iji wụnye bụ iji Njikwa ngwugwu APT maka nkezi onye ọrụ. Ọ bụrụ na nke a na-arụ ọrụ nke ọma, jidesie ya ike ma ghara ịnwale ma wụnye usoro isi mmalite n'ihi na ọ ga-eme ka ihe dị mgbagwoju anya karịa ihe ị chọrọ.
Nke mbụ, wụnye ImageMagick site na iji iwu a:
A naghị atụ aro nhọrọ nrụnye a maka nkezi onye ọrụ. Otú ọ dị, n'ihi na ndị chọrọ iji isi iyi version, na-eso nzọụkwụ n'okpuru.
Nke mbụ, gbaa mbọ hụ na etinyere GIT:
Ugbu a mechie GIT:
Mara, dabere n'otu esi edobe GIT gị, yana enwere ike iji ya sudo iwu.
Osote, CD n'ime akwụkwọ ndekọ aha:
Ugbu a wụnye ndabere achọrọ:
apt install make build-essential automake
Ị ga-achọ ugbu a iji iwu ./configure:
Ndị ọrụ dị elu chọrọ ihe ndị ọzọ site na ImageMagick ọ na-atụ aro iji - na-modul iru:
Ugbu a ị wulitela ma hazie gburugburu, ọ bụ oge iji iwu ahụ chịkọta ya -eme ka.
Aghụghọ dị mma bụ ịkọwapụta ya -j n'ihi na nke a nwere ike ịbawanye ọsọ nke mkpokọta ma ọ bụrụ na ị nwere ihe nkesa dị ike. Dịka ọmụmaatụ, LinuxCapable nkesa nwere 6 CPUs, enwere m ike iji 6 niile ma ọ bụ opekata mpe jiri 4 ruo 5 mee ka ọsọ ọsọ.
Mgbe ị chịkọtachara koodu mmalite, tinye iwu nwụnye na ọdụ gị:
Mgbe echichi ahụ gasịrị, ịkwesịrị ịhazi njikọ njikọ oge na-arụ ọrụ ike:
Ugbu a nyochaa nrụnye wee wuo:
Copyright: (C) 1999-2021 ImageMagick Studio LLC
Delegates (built-in): fontconfig freetype jbig jng jpeg ltdl lzma png tiff x xml zlib
Ọ bụrụ na i tinye ImageMagick site na isi iyi site na iji git, megharịa usoro nrụnye ahụ mgbe i wepụrụ mgbanwe ọhụrụ ọ bụla site na isi mmalite Github site na iji iwu njedebe ndị a:
Ụzọ kachasị ọsọ iji nwalee ma ọ bụrụ ImageMagick na-arụ ọrụ bụ iji iwu ntụgharị akara dị ka ndị a:
Ọ bụrụ na ị wụnye ImageMagick site na iji ma ndabere Debian repository ma ọ bụ ImageMagick isi iyi, ule logo.gif ga-emi odude ke n'ụlọ ndekọ.
mbụ CD na ndekọ ụlọ gị, jiri nke gị dochie aha njirimara:
Wee depụta ndekọ ahụ site na iji ls iwu:
Ọ bụrụ na ị si na isi iyi arụnyere, lee anya na akwụkwọ ndekọ aha ị rụnyere ImageMagick, wee gosi ma ọ bụrụ logo.gif e kere.
Akpa, CD na ndekọ nwụnye, maka nkuzi ọ bụ:
Mgbe ahụ, jiri ya ls iwu iji hụ ma logo.gif emebere:
N'okpuru bụ tebụl iwu na ngwaọrụ enwere ike iji ImageMagick:
dikwa ndu Gosipụta usoro onyonyo dị ka ihe nkiri.
tụnyere Nyochaa ihe onyonyo abụọ, wee jiri anya nke uche hụ ọdịiche dị na mgbakọ na mwepụ dị n'etiti ha.
mejupụtara Jiri nghọta agbanwe agbanwe mepụta otu onyonyo n'ofe ọzọ iji mepụta onyonyo agwakọtara.
ijisi Tụgharịa asụsụ ma mebie script edere na MSL, asụsụ Magick Scripting.
tọghata Tụgharịa onyonyo site n'ụdị faịlụ gaa na nke ọzọ. Ngwá ọrụ a nwekwara ike ime ka ọ daa, gbutuo, speckle, dither, ma gbanwee ọdịnaya nke onyonyo.
ngosi Ihe nlele onyonyo dị mfe.
mata Gosipụta akụkụ onyonyo a, ogo yana metadata onyonyo ndị ọzọ.
mbubata Were ihuenyo ahụ na faịlụ onyonyo.
huzie Megharịa onyonyo. Yiri ntụgharị, mana degharịa onyonyo izizi.
Montage Mepụta onyonyo nwere onyonyo pere mpe. Iwu a nwere ike ịmepụta otu onyonyo nwere thumbnails nke ọtụtụ onyonyo.
stream Hazie data onyonyo wee chekwaa ya na faịlụ ka a na-ebuga ya site na isi mmalite ntinye. Ọ bara uru maka ọnọdụ ndị nwere obere iyi data ma ọ bụ nnukwu ihe oyiyi nke nhazi data kwesịrị ịmalite tupu echekwa ihe oyiyi ahụ dum.
Na nkuzi, ị mụtara ụzọ abụọ iji wụnye ImageMagick on Nnenna 11 Bullseye. N'ozuzu, ImageMagick ka na-ewu ewu nke ukwuu, karịsịa na gburugburu ebe nrụọrụ weebụ WordPress na plugins, ma ọ bụ nhọrọ a nwalere na anwale maka igosipụta, ịmepụta, ịtụgharị, gbanwee, na dezie ihe oyiyi raster.
Maka ozi ndị ọzọ, biko gaa na Ebe nrụọrụ weebụ ImageMagick.
Categories Debian Tags Nnenna 11 Bullseye Mail igodo
Otu esi etinye Jellyfin Media Server na Ubuntu 20.04
Otu esi etinye asụsụ mmemme Swift na Debian 11 Bullseye